Xildhibaan Jindi: “$500,000 ka badan ayey Xukuumaddu u ageedsataa siyaasadda” | Somsoon
Home WARAR Xildhibaan Jindi: “$500,000 ka badan ayey Xukuumaddu u ageedsataa siyaasadda”
Xildhibaan Jindi: “$500,000 ka badan ayey Xukuumaddu u ageedsataa siyaasadda”
Xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Axmed Jindi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ku eedeeyay in ay ka gaabisay howlaha ugur mashada dadka uu saameeysay fatahaadda ay samaynayaan wabiyada mara dalka.
Xildhibaanku waxaa uu sheegay in ay aad u yaryahay gar-gaarka loogu talagay dadka ku dhibaateysan Beledweyne iyo gobolada kale ee dalka sida Bay iyo Jubboyinka, waxa uu sheegay in qorshaha iyo gar-gaarka la qoondeeyay aysan isku dhaweyn dhibaatada jirtana ay ka baaxad weyn tahay sida ay xukuumaddu wax u maareynayso.
Lacag gareysa 500,000 doollar, ayuu sheegay xildhibaan Jindi in ay xukuumaddu ugu tala gashay maareyta fatahadda Beledweyne, taasna ay aad u yartay isla markaana aysan kaafi karin dhibaatada ka taagan magaaladaas, lago intaas ka badan ayuu sheegay xildhibaankuu inay xukuumaddu u isticmaasho arimaha siyaasadda.
Waxaa sii kordhaya barakaca dadka reer Beledweyne, waxaana daafaha magaaladaas ku dhibaateysan dad naftooda kala baxsaday fatahaadda wabiga Shabeelle, kuwaas oo aan heysan hooy, har iyo wax ay quutaan toona.
Sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa laga soo sheegayaa imn maanta uu wabiga Jubba fatahaad ka geystay, gobolka Bay gaar ahaan magaalooyin ay ugu horeyso Bardaale ayaa laga soo sheegayaa daadad ku rogmaday oo ay dadki ka barakaceen.
Article horeFatahaadii Beledweyne oo saamaysay deegaano hor leh
Article socoda Madaxweyne Farmaajo oo dhambaal hambalyo ah u diray dhiggiisa dalka Turkiga